Baarlamaanka Soomaaliya oo kulmay - BBC News Somali
Baarlamaanka Soomaaliya oo kulmay
24 Nofembar 2014
Image caption Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaalya Maxamed Cismaan Jawaari.
Saxaafadda ayaan loo ogolaanin xitaa meel u dhow baarlamaanka, balse qaar ka mid ah xildhibaanada labada dhinac ayaa sheegay in waraaqaha motion-ka loogu qaybiyay iridka laga galo baarlamaanka.
Warar ayaa sheegay in qaar ka mid ah xildhibaanada ka soo horjeeda motion-ka ay isla goobta ku jeex-jeexeen.
Motion-ka ayaa ku baaqaya in codka kalsoonida loo qaado Ra'iisulwasaaraha Soomaaliya, Cabdiweli Sheekh Ahmed, kadib markii khilaaf isaga iyo madaxwaynaha u dhaxeeya uu carqaladeeyay howlihii dowladda.
Is afgaranwaaga madaxwaynaha iyo ra'iisul wasaaraha, ayaa soo shaac-baxay kadib markii Ra'iisulwasaaruhu uu sameeyay isku shaandhayn uu wasiirka cadaaladda, Faarax Cabdulqaadir u wareejiyay wasaaradda xanaanada xoolaha.
Bulshada caalamka, ayaa ugu baaqday madaxda dalka in ay murankooda wadahadal ku xaliyaan.